Clasico: Barcelona iyo Real Madrid oo ka cabaadaya garsoore Mateu Lahoz
HomeWararka MaantaClasico: Barcelona iyo Real Madrid oo ka cabaadaya garsoore Mateu Lahoz
Labada naadi ee Barcelona Iyo Real Madrid oo u ballansan kulankooda u dambeeya horyaalka La Liga ee Clasico 22ka March ayaa ka sii cabaadaya garoosre Antonio Mateu Lahoz in loo doorto in uu ciyaarta dhexdhexaadiyo.
Inkasta oo aan wali si rasmi ah loo shaacinin garsooraha dhexdhexaadin doona ciyaartaas, haddana laba naadi midkoodna ma jecla in ay ninkan ad-adag ee kaadhadhkuna ka soo horreeyaan uu ciyaarta dhexdhexaadiyo.
Garsoore Mateu Lahoz oo ka soo jeeda magaalada Valencia, ayaa waxa lagu naanaysaa nin ciyaarta socodsiiya, kaas oo ogolaada in khaladaadka qaarkood ay ciyaarta ka mid yihiin, isla markaana aan qabanin khaladaadka yaryar oo dhan.
Labada kooxood ayaa u arka Lahoz in uu yahay calaamad digtoonaan ah in ay sii galaan, isla markaana ay ciyaartooyadoodu diyaar u ahaadaan dagaalka kooxda ka soo horjeedda, iyagoo og in khaladaadka yaryar iyo kuwa jidheedba aanu qaban doonin.
Labadii kulan ee u dambeeyey ee dhex maray Barcelona iyo Real Madrid ee uu dhexdhexaadiyo garsrooe Lahoz, waxa badisay naadiga Los Blancos. 2012 ayay Real Madrid iyo Barcelona ku kulmeen lugta hore ee Spanish Super Cap taas oo ku dhamaatay 2-1 ay Real Madrid ku badisay. Lugtii labaadna waxay noqotay 1-1 ay ku badisay, taas daraadeedna Real Madrid ayaa koobkaas ku hanatay 3-1.
Ciyaarta kale, waxay ahayd kulankii ka dhacay garoonka Valencia ee Copa del Rey ee ay Real Madrid ku badisay 1-0, taas oo lagu xasuusto orodkii laga yaabay ee uu Gareth Bale goolkaas ku dhaliyey.
Xili-ciyaareedkan Barcelona saaxiib ayay la tahay Mateu Lahoz, saddex kulan oo uu dhexdhexaadinayeyna dhamaantood waa ay ku guuleysatay. Ciyaarahaas ayaa waxa ay kala ahaayeen (Barcelona 5-2 Athletic Bilbao. Barca 2-0 Rayo Valecano. Barca 5-0 Cordoba).
Dhinaca kale, garsoore Lohz waxa uu dhexdhexaadiyey ciyaar kaliya oo ay Real Madrid lahayd xili ciyaareedkan, taasna waxa ay la kulantay guul-darro. Waxa ay ahayd kulan dhex maray Atletico Madrid oo ka dhacay Bernabeu kaas oo u ku dhamaaday 2-1.
Barcelona vs Real Madrid: Suurtogalnimada Inay Isku Dhacaan Champions League